सम्भवतः महिला आफैं बाहेक कसैले पनि महिलाको दिमागको काम गराइको बारेमा बुझ्न सकेका छैनन् । महिनावारीको समयमा, महिला आफैलाई समेत आफ्नो मष्तिकले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा हुदैन !महिनावारी महिलाको जीवनको त्यो अवधि हो जहाँ उनको पुरुषले उनलाई पागल भएको दाबी गर्छन् । यो यस्तो समय पनि हो जहाँ उनको महिनावारीको अवधि कम हुने क्रममा पूर्ण रुपमा हर्मोनहरु बिच्छेद हुन्छन् । महिनावारी महिलाको जीवनको त्यो अवधि हो जहाँ उनको पुरुषले उनलाई पागल भएको दाबी गर्छन् । यो यस्तो समय पनि हो जहाँ उनको महिनावारीको अवधि कम हुने क्रममा पूर्ण रुपमा हर्मोनहरु बिच्छेद हुन्छन् । महिलाहरुको लागि, महिनावारी आफ्नो जीवनको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिन्दु हो । ओस्ट्रोजेन हर्मोनको घट्दो स्तर र मानिसिक र शारिरिक लक्ष्यणहरुको परिणाम घट्नाहरुको चक्र जस्तो हुन सक्दछ, जसले उनीहरुमा दु:ख मात्र जोड्दछ। उदाशिनता: उदाशिनताले प्रत्येक मध्य-उमेरका महिलालाई असर गर्ने गर्दछ । २०% महिलाहरुमा महिनावारीको समयमा उदाशिनता रहेको केहि हदसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ । उदाशिनताको उच्च अवधी पेरिमेनोपजल वर्षहरुमा हुने गर्दछ, जब महिनावारीको नजिक आउदछ । विशेषज्ञहरुको अनुसार यसको कारण, यो समयमा महिलाहरुमा महिनावारीको पिर भएको तथ्य हो। यधपी केहीका लागि यो बर्षौ सम्मको महिनावारीको तनाबको अन्त्य हो, अरु धेरैका लागि उनीहरुको स्त्रीत्वको अन्त्य हो । यही एउटा सोच नै धेरै नकारात्मक विचारहरू र उदाशिनता ल्याउन काफी छ । यो मात्र नभै, पेरिमेनोपजल र महिनावारीको उमेरमा हुने उदाशिनता हर्मोनहरुको उतार चढापको कारण पनि हो । अनुसन्धानले देखाउँछ कि प्रजनन हार्मोनको स्तर, विशेष गरी एस्ट्रोजेन मानसिक परिवर्तनहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ । निन्द्राको समयमा परिवर्तन: महिनावारीको परिवर्तन अवस्थामा ४० देखि ५०% महिलाहरुमा अनिद्रा देखिन्छ । निन्द्रहिन रात बिताउने महिलाहरुले चिडचिडाहट, झन्झटपना, तनाव र उदाशिनताको लक्ष्यण देखाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । महिनावारीको समयमा हुने निन्द्राको गडबडी अस्ट्रोजेनको स्तर घट्ने क्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ । वास्तवमै यो दाबी सत्य हुन सक्छ किनकी धेरै महिलाहरूले एक्सोजिनस हार्मोन थेरेपीलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छन् । एक अध्ययनले निद्रा परिवर्तनहरू लुइटिनाइजिङ हार्मोन स्तरसँग सम्बन्धित छन् भन्ने दाबी गर्छ, जसले गर्दा शरीरको तापमान बढ्छ । महिनावारीको परिवर्तन हुने उमेरमा निद्रा एपनिया पनि हुन्छ । यो कम प्रोजेस्टेरोन तहको कारण हो, किनकी प्रोजेस्टेरोनले श्वसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । महिनावारिको समयमा वजन बढ्ने हुनाले पनि एपनिया भएको देखिएको छ । भय विकार: भय विकार सामान्यत पेरिमेनोपजको चरणमा भएको देखिन्छ । भएको विकार बिग्रन सक्छ वा नयाँ विकार आरोहण हुन सक्छ । भय विकार सामान्यत विभिन्न शारिरिक महिनावारीको लक्ष्यणहरु देखा परेका महिलामा प्रकट हुन्छ । भय विकार जीवनका नकरात्मक घट्नाक्रम, पुर्व-अवस्तित मेडिकल रोग र घट्दो दैनिक कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । अव्सेसिव कम्पल्सिव डिस्अर्डर्: ओसिडिको नयाँ प्रारम्भ, विग्रदो वर्तमान अवस्था अथवा महिनावारीको समयमा लक्ष्यणहरुको शैलीमा परिवर्तन देखिन्छ । ओसिडी परिवर्तनहरु गर्भअवस्थाको समयमा र महिनावारीको परिवर्तन समयमा पनि देखिन्छ, जसले ओसिडिको लक्ष्यणहरुमा हुने हर्मोनको प्रभाव जनाउदछ । द्विध्रुवीय गडबडी: द्विध्रुवीय गडबडी भएका महिलाहरुले पेरिमेनोपजल चरणमा लक्ष्यणहरु तिब्र हुदैं गएको अनुभव गर्छन । यी महिलाहरु नै हुन् जसलाई अत्यधिक रुपमा महिनावारीको समयमा कठोर उदाशिनाता अनुभव हुने गर्छ । स्क्रिजोफ्रेनिया: स्कित्जोफ्रेनिया सामान्यत आफै वयस्क उमेरमा प्रकट हुन्छ । त्यसपश्चात दुवै महिला र पुरुषमा नयाँ घट्नाको आनुपत विस्तारै घट्दै जान्छ । तापनि, ४५ देखि ५० बर्षको उमेरका महिलाको समुहमा दोस्रो उच्च चरण छ । तर पुरुषमा यस्तो चरण देखिदैन । यसले यो जनाउँछ कि अस्ट्रोजेनले स्कित्जोफ्रेनियाको सुरुवात गराउने वा पुर्व-अवस्थित स्तिथितिलाई बिगार्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
महिलाको लागि, एउटा उत्कृष्ट, खुशी जीवन सन्तुलन कार्यबारे हो र तिनीहरु पहिले देखिनै काम र बिहे सन्तुलन गर्न सफल भैरहेका छन् l यद्दपी, प्रत्येक महिलाले यो दैनिक जीवनमा सन्तुलन गर्ने कार्य गर्दैगर्दा थुप्रै चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरु सामना गर्नुपर्छ lमहिलाको लागि घर र काम बीच सन्तुलन गर्ने धेरै कठिन हुन्छ l त्यहीपनि, वर्षैपिछे, घर व्यवस्था गर्दै बाहिर काममा जान इच्छुक हुने महिलाहरुको संख्या बढ्दैछ l यो किन हो भने सफल करियरले महिलालाई समाजमा आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न मद्दत गर्नसक्छ, सम्मान पाउन र उनको निहित गुणहरु, उत्साह र सपनाहरुलाई न्याय दिन मद्दत गर्नसक्छ l त्यसैले एउटा सफल कामगर्ने महिला एउटा खुशी महिला हो र तथ्यांकले देखाउँछ कि त्यस्ता महिलाहरुले आफ्नो बच्चा र पतिलाई खुशी राख्छन् l थप स्थिर बिहेहरु सत्तरीको दशकमा, जब महिलाहरु ठुलो संख्यामा कार्यस्थलहरु प्रवेश गर्न सुरु गरे, त्यहाँ डिभोर्स रेटहरु बढ्न सुरु गरे l यद्दपी, बिगतको दशकमा, कामगर्ने जोडीहरु मध्ये डिभोर्स दरहरु वास्तवमा घटेका छन् l आज, पुरुषहरुमा कामगर्ने महिला एउटा पार्टनर हुनुपर्छ भन्ने विचार बढेको छ l थुप्रै देशहरुमा, पुरुषहरुले वास्तवमा घरेलु कामहरु बाड्छन् र बच्चा हेरचाहको लागि समर्पित गर्छन् ताकी उनीहरुको महिलाहरु सफलतापूर्वक दुवै घर र काम सम्हाल्छन् l यद्दपी, घर र बच्चाहरुको दायित्व अझै प्रमुख हो, महिलाहरुको लागि l तपाईंको काम र बिहे सफलतापूर्वक व्यवस्था गर्न यहाँ छ तरिकाहरु छन्: सही काम खोज्नुहोस् तपाईंले कार्यस्थल र घरको काम व्यवस्था गर्न तनाव सहज बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं सही निर्णयहरु बनाउनुहुन्छ l अध्ययनहरुले इंकित गर्छ कि कम मागहुने कार्यमा पहुँच हुने जोडीहरुले राम्रो यौन सम्बन्ध र राम्रो सम्बन्धहरु पाउँछन् र त्यसैले कमै तनावमा हुन्छन् l यद्दपी, जब कामगर्ने समय लामा छन्, अवस्था उल्टो हुनसक्छ l त्यसैले एउटा रोमान्चक काम पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण छ जसमा तपाईंले अझै नियन्त्रणमा पाउन सक्नुहुन्छ विशेषगरी जब हामीसँग घरमा साना बच्चाहरु छन् l कामगर्ने समय मिलाउने प्राय महिलाहरुले आफ्नो करियरहरु बिचमै छोड्नुपर्छ किनकि उनीहरुको पतिहरु लामो समयको लागि काम गर्छन् र बच्चाहरु हेरचाह गर्न कोही उपलब्ध हुँदैन l यदि श्रीमती पनि काममा राम्रो छ भने जोडीले ति कामहरु गर्नुपर्छ जसले दुवैजनालाई काम गर्न अवसर प्रदान गर्छ किनकि यो गर्नेले तिनीहरु दुवैजनालाई सन्तुष्ट राख्नेछ l त्यहाँ एउटा सम्भावना छ कि श्रीमान वा श्रीमतीले आम्दानी अलिकति गुमाउन सक्छन् यो समायोजनमा तर अन्तिममा त्यसले खुशी बिहे पाउने मौका बढाउछ l काम छोड्दाको नकारात्मक प्रभाव यदि काममा उन्मुख महिलाले परिवार मागहरुको कारणले आफ्नो काम छोड्छिन् भने त्यसले बिहेको खास जगनै हल्लाउन सक्छ साथै उनीलाई निराश पनि छोड्नेछ l साथै एउटा ब्रेक लिनु भनेको तपाईंले आफ्नो करियर पुनः सुचारु गर्न चाहँदा तपाईंले निकै छिटो टिप्नुपर्छ जुन वास्ताकितामा निकै कठिन छ l यी अवस्थामा, कामगर्ने आमाहरु केटाकेटी र उनीहरुको बुवाबीचको सम्बन्ध दृढ गर्न मद्दत गर्छन् जब बुवाहरु बच्चा हेरचाह गर्न समय बिताउछन्, बच्चाहरु र बुवा बीचको नजिकको सम्बन्ध बन्छ जुन बुवा काममा जाने परिवारमा सम्भव छैन l अध्ययनले देखाउछ कि दुवै बुवा र आमा बीचको बराबर समर्पणमा हुर्किएको केटाकेटीको उच्च उदेश्य र आकांक्षाहरु हुन्छ l कम दोषी महसुस गर्नुहोस् एउटा कामगर्ने महिला कम दोषी महसुस गर्छ किनकि उनीले समर्पित गृहिणीहरुसँग तुलना गरिएझैँ आफ्नो केटाकेटीसँग धेरै समय बिताउन सक्दिन l यद्दपी, यदि पतिले केटाकेटी हुर्काउने जिम्मेवारीहरु सम्बन्धि बाड्छ भने दुवै अभिभावकहरु बच्चाहरुको लागि आफ्नो भूमिका खेल्दा खुशी हुन सक्छन् l एउटा सफल करियर भएको एउटा महिला सकारात्मक र आत्मविश्वासी हुन्छ उनीले गर्ने हरेक कुराको बारेमा, जसले अन्त्यमाउनको परिवार खुशी बनाउँछ l
तलतल संधै र पुरा तरिकाले प्रकृतिक हैनन् । तपाईले आफ्नो शरीरलाई के दिनुहुन्छ र तपाईको स्वाद तन्तुलाई सिकाउनु हुन्छ त्यो त्यसको परिणाम हो ।अनुसन्धानले देखाएको छ कि चिनी हेरोइन भन्दा लत लाग्ने हुन सक्छ । यो पढ्नु अगाडि तपाईले के खानु या पिउनु भएको थियो ? ब्रेड ? केरा ? चकलेट ? केक ? फ्रेन्च फ्राईज ? वेफ़र ? डोनट ? बिस्कुट ? सोडा ? जुस ? वाइन ? भोड्का ? कफी ? चिया ? अन्त्यमा तिनीहरु चिनी हुन् । कुनै मिठो, कुनै नमिठो हुन्छन् । बच्चा हुँदा सबै भन्दा पहिलो हामीले दुध खान्छौं । त्यो स्वभावतः गुलियो हुन्छ । त्यो उमेर देखि हामीले बुझ्छौं कि हामीलाई चिनी मनपर्छ अनि त्यो चाहिन्छ । तपाईलाई चिनीको लत हुन सक्छ यदि : हरेक खाना पछि तपाईलाई “केही मिठो” चाहिन्छ । तपाईले चिया या कफीमा चिनी नहाली खान सक्नु हुदैन । बाहिर गएको बेला तपाईलाई मिठो चाहिन्छ । बचेको केक लिन तपाई फ्रिजमा खोज्न जानु हुन्छ । तपाई खुशी हुनको लागि त्यो सानो चकलेट भए पुग्छ । घरमा भएको अन्तिम लड्डु तपाइले सकाउनु हुन्छ । तपाईलाई सबै खानामा केचप चाहिन्छ- फ्रेन्च फ्राईज, नुडल्स, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचोरी । पढ़े पछि तपाईलाई माथिको सबै खाना चाहिन्छ । बाहिर घाम भएको बेला तपाईलाई पानीले पुग्दैन, तपाईलाई गुलियो जुस चाहिन्छ । मक्टेल या सोडाले तपाईको डिनर पुरा हुन्छ । अनि अरु यस्तै कुराहरु । त्यसैले हेर्नु भयो त, सके सम्म हामी सबैलाई चिनीको लत लागेको छ । अध्धयनले देखाउँछ कि अमेरिका, बेलायत अनि अस्ट्रेलियाको हरेक मान्छेलाई चिनीको लत लागेको छ । चिनीको लत लाग्नु कारणहरु धेरै छन् । पहिलो कुरा, चिनीको स्वाद मिठो छ त्यसमा केही संदेह छैन । स्वादमा विवाद गर्न मिल्दैन । तर के तपाईलाई थाहा छ स्वाद ब्नाइएको हो ? लत संधै र पुरा तरिकाले प्रकृतिक हुदैन । तपाईले आफ्नो शरीरलाई के दिनु हुन्छ र तपाईको स्वाद तन्तुलाई सिकाउनु हुन्छ त्यो त्यसको परिणाम हो । दोस्रो कुरा, चिनीको कम्जोर भएकोले व्यवसायहरुले धेरै फाइदा उठाउँछन् । तपाई जता जानु हुन्छ त्यता चिनीको विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन् । क्याफे, रेस्टुरेन्ट, सामान्य पसल, सुपरमार्केट, ठेला- तपाईको ध्यान ल्याउन उनीहरुसँग धेरै परिकारहरु हुन्छन् । कसैले कत्ति रोक्न सक्छ र कत्ति मेन्युलाई फिल्टर गर्न सक्छ ! तेस्रो कुरा, चिनीले तुरुन्तै खुशी दिन्छ । त्यो उसकोलागि काम गर्छ अनि हाम्रो समस्यामा थपिन्छ । काममा दुखि दिन भए पनि चकलेट हेरेर तपाईलाई खुशी दिन्छ । अल्छि लागेको छ, आइस् क्रिमको लागि बाहिर जाओं । यो धेरै जस्तो हुन्छ । चिनी किन त्यति गुलियो छैन ? चिनीले के न नराम्रो गर्छ भनेर सोच्छौं, खुशी हुनु सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यद्यपि, चिनी अरु खाना भन्दा धेरै नराम्रो हो । एक अनुसन्धानको लागि, भान्छामा भएको सबैको सामग्री हेरेर कत्तिमा र कत्ति चिनी छ भनेर हेर्नु । अरो तिन दिनको लागि चिनी भएको कुराहरु नखाने कोशिश गर्नु । तपाई अचमित पर्नु हुन्छ । चिनी खानु भएन भने धेरै कुराहरु छोड्नु पर्छ । चिनीसँग के समस्या छ भने त्यसले गर्दा अझै खान मन लाग्छ । थोरैले सन्तुष्टि दिदैन । तुरुन्तै लामो समय सम्म चिनीले चिनीको आकांक्षा बढाउँछ । जब तपाईले केही गुलियो खानु हुन्छ, त्यतै रोक्न सक्नु हुदैन, आरु खान मन लाग्छ अनि अरु खान मन लाग्छ । लामो समयको लागि, तपाईको स्वाद तन्तु चिनीको लागि तलतल हुन्छ । तपाईको शरीरले सोच्छ कि जब तपाईको दिमाग सुस्त हुन्छ त्यसले चिनी खोज्छ । राम्रो महसुस गर्नको लागि यो सिकाएको छ । जब तपाईले यी लत लगाउनु हुन्छ तपाई चक्रमा पर्नु हुन्छ । चिनीलाई प्राय सेतो विष भनेर भनिन्छ । बढाईचढाई गरेर भनेको होइन । शरीरमा बल दिनु बाहेक चिनीको अरु पिषक तत्व छैन । यसले धेरै स्वास्थ्य जटिलाताहरु बढाउँछ । चिनीले गर्दा मधुमेह मेलिटास, मोटोपन, मुटु रोग, हर्मोनल असंतुलन, यौन दुर्व्यवहार अनि अरु धेरै कुराहरु हुन्छ । चिनीको तलतल भनेको सबै भन्दा सामान्य तलतल हो । चिनीलाई पूर्ण रुपमा छोड्न गाह्रो हुन्छ तर त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । तलतललाई कसरी हराउने ? एक्शन लिने समय भयो ? यो सुचनाहरुले गर्दा चिनी खान कम गर्न मन लागेको होला । पर्खनु । रक्सि, चुरोट, ड्रग- यिनीहरुले लत लाग्छ भनेर बुझेको छ । त्यसैले समर्थन समुहहरु छन्, हाम्रो वारीपरिको मान्छेहरुले हामीलाई लतबाट छुट्टाउनको लागि मद्दत र प्रेरित गर्छन् । चिनीको लत छुट्टाउन झन् गाह्रो हुन्छ । त्यो गर्नको लागि धेरै शक्ति र दृढता चाहिन्छ । के तपाई चुनौतीको लागि तयार हुनुहुन्छ ? चिनीको लतबाट हट्नको लागि केही उदाहरणहरु हेरौं : पानी कम प्युनु बनावटी गुलियो पेयलाई कम गर्नु- कोलाहरु, सुन्तला, चिसो चिया, क्यानमा भएको पेयहरु, सोडाहरु । तिनीहरुको शुन्य स्वास्थ्य लाभ छ । तपाईले तिनीहरुलाई स्वादले गर्दा मात्र प्युनु हुन्छ । ध्यान राख्नु कि स्वाद केही समयको लागि मात्र हो । भित्र पुगे पछि यी पेयहरुले तपाईको शरीरमा नराम्रो गर्दै छन् । एक चम्मा कम-चिया या कफी ? तपाईले आफ्नो दिन सुरु गर्नको लागि के प्युनु हुन्छ ? जे भए पनि चिनी कम खानु । यदि तपाईले दुई चम्चा लिनु हुन्छ भने एक लिनु । यदि तपाईले एक चम्चा लिनु हुन्छ भने आधा चम्चा कोशिश गर्नु । सुरुआतमा गाह्रो हुन्छ तर तपाईलाई बानि परे पछि मन पर्छ । जुस प्युनु भन्दा फल खानु । क्यानले जे प्युनु हुन्छ त्यसमा चिनी हुन्छ । क्यानलाई नाइँ भन्नु । कम खानु केचाप्को बोतललाई नछुनु । हप्तामा चकलेट खाने मात्रा बनाउनु । तपाईको निर्णयलाई तपाईको मनस्तिथीले गर्दा परिवर्तन नगर्नु । बेकरीको कुराहरु चिनीले भरिएको हुन्छ, तिनीहरु छन् भनेर बिर्सिनु । जब किराना पसल जानु हुन्छ तिनीहरुलाई नहेर्नु । ब्रेकफास्टमा सिरियल मन पर्छ ? प्याकेटमा चिनी कत्ति छ भनेर हेर्नु । जसमा स्वाद हालेको हुन्छ त्यसमा बढी चिनी हुन्छ । साधा लिनु । पोषणको लागि आफ्नै फल या डराई फ्रुटहरु हाल्न मिल्छ । अवसरको बेल मात्र मिठो खानु पर्छ । तपाईलाई हरेक दिन चाहीदैन । मिठास तपाईको प्लेटमा भन्दा तपाईको बोलीमा होस् ।
के तपाईं सधैं यौन सुखबारे धेरै जानकारी राख्न रुचि राख्नुहुन्थ्यो र विना हिचकिचाहट कसैलाई सोध्न सक्नुहुँदैनथ्यो ? केही छैन । हामीलाई अब ती पाँच शीर्ष बिन्दुहरू थाहा हुनेछ जसले महिलालाई आनन्दको ढोकासम्म लैजान्छ ! संभोगको बेलामा मात्र यौन सुख हुन्छ ! यस्तै खालका धेरै कुराहरू पढ्नुभएको वा सुन्नुभएको छ ? ल अब योनीबाहेक महिला यौन सुखका ती दबाब क्षेत्रबारे बुझ्ने कोसिस गरौँ ।महिलाको यौन सुखसँग जोडिएका तथ्यको तुलनामा सधैं नै धेरै कल्पनाका कुराहरू रहेका छन् । यस बिषयमा हरेकले बताउने आफ्नै अन्तर्दृष्टि हुन्छ, तर वास्तविकता भनिएका कुराभन्दा बिल्कुलै बेग्लै छन् । धेरैजस्तो भन्दै आइएको छ कि यौन सुख संभोगको बेलामात्र हुन्छ वा योनीमा रहेको भंगाकुरलाई उत्तेजनामा ल्याएर मात्र यसको सुख प्राप्त हुन्छ । अब भन्नुपर्दा, सत्य यो हो कि महिला यौन सुख शरीरको अन्य गैरयौन अङ्गलाई चलाएर पनि हुनसक्छ । अधिकांश महिला संभोगको समयमा यौन सुख अनुभव गर्न सक्छन्, तर केही अरुको हकमा थप केही गर्नुपर्ने हुन्छ जसले उनीहरूलाई गहन आनन्दका साथ यौन सुख महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यदि आनन्द महसुस गराउने अन्य ठाउँहरू कुन हुन् भनेर खोज्ने हो भने यहाँ तपाईंलाई त्यहाँ लैजान ५ बाटोहरू छन् । स्तन र स्तनको मुन्टो : स्तन चलाउनु र स्तनको मुन्टो चुस्नु पूर्व यौनक्रिडाको समयमा धेरैजस्तो गरिने कार्य हुन्, तर केही महिलाको लागि यसले उनीहरूलाई परमआनन्दको सागरमा तुरुन्तै लैजाने हुन्छ । एक खोज अध्ययनका अनुसार स्तनको कोमल स्पर्शले मात्र पनि धेरैजसो महिलालाई यौन सुखको बाटोमा लैजानसक्छ । स्तनभन्दा पनि अझै धेरै स्तनको मुन्टो अधिक संवेदनशील बढाउने अङ्ग हो । नाइटो (नाइटो वरिपरिको भाग) : यस्तो पनि भन्ने गरिएको छ कि महिलाको नेटो वा भंगाकुरलाई चलाउनाले लगभग समान सुख वा उत्तेजना दिन्छ किनकि यी दुवै स्नायुगतरुपमा एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसकारण, महिलामा यौन सुख बढाउन यो सर्वाधिक खोजी गरिने सहायक अङ्ग बन्न पुग्दछ । नाइटो क्षेत्रमा औंला घुमाउँदा वा नाइटोमा चुम्बन गर्दा महिलाको धड्कन दौडाउन सक्छ । ओठ महिला यौन सुखको दबाब बिन्दुको लागि धेरै महत्व नदिइएको क्षेत्र, तर धेरै प्रभावकारीमध्येको एक पनि । अध्ययनले बताउँछ कि कामुक चुम्बनले केही महिलामा यौन सुख बढाउने काम गर्न सक्छ । ओठ वा अनुहारमा बिस्तारै छुने वा कोलम ढंगले हात फिराउनाले कुनै महिलालाई यति धेरै उत्तेजित गर्छ कि उनले यौन सुख प्राप्त गर्न सक्छिन् । यदि चुम्बनले नै यौन सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भने उनको पुरुषलाई अवश्य पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाउँछ । घाँटी वा गर्दन : महिलालाई जगाउने एक महत्वपूर्ण दबाब बिन्दु घाँटी वा गर्दन पनि हुन सक्छ । दबाब बिन्दु भन्नाले घाँटी निमोठ्ने भनेर हामीले भन्न खोजेको हैन (तथापि त्यसो गर्नाले पनि केही महिला पूर्ण उत्तेजित हुने गर्छन्, र धेरै यौन आनन्द अभ्यास !) । हामीले भन्न खोजेको कानको लोती तल र वरपर कोमल मायालु छुवाइ हो । त्यहाँ गरिने एक मायालु चुम्बन वा टोकाइले रसलाई सही दिशामा बहाउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष यो हो कि यसले महिलामा हाँसोको फोहोरा पनि ल्याउन सक्छ । खुट्टाको बुढी औंला : महिलाको खुट्टाको बुढी औंला चुम्नु र चुस्नु भनेको सदैव मनपर्ने पूर्व यौनक्रीडा हो । तर कसलाई सिकाइएको छ कि यो यौन सुख वढाउने मुख्य ठाउँ हुनसक्छ । बुढी औंला चाट्ने वा चुस्ने कार्य गर्दा यसले महिलालाई आनन्दको अर्को संसारमा पठाउन सक्छ । यो सँगै अन्य केही कोमल उपायले महिलालाई बहुयौन सुखको सागरमा पौडन मद्दत गर्न सक्छ र कल्पना गर्नुहोस् त्यहाँ १० औंला छन्, तब त यसले आनन्दको सम्भावनालाई दशगुणा बढाउँछ !
पुरुषको लिंग एउटा नरम बिन्दु हो प्राय पुरुषहरुको हकमा, किनकी त्यो एउटा पुरुषको यौन जीवनशक्ति र पुरुषत्वको केन्द्र हो lराम्रो काम कसरी गर्ने भनेर जान्नको लागि यहाँ एक छिटो तरिका छ । पुरुष लिङ्गको मुख्य काम पिशाव फेर्ने र यौन सम्पर्क गर्ने हो । त्यसैले नरम साबुन र सुक्खा तौलियाले नियमित रूपमा धोएर ब्याक्टेरिया बनाउने कुनै पनि गंधलाई हटाउनु स्वच्छताको दृष्टिकोणबाट आवश्यक हुन्छ । फोरस्किनहरु ग्ल्यान देखिने गरी पछाडी तानिएको हुनुपर्छ नत्र यसको कारण यौन सम्पर्क गर्दा रगत आउने हुनसक्छ । तान्न मिल्ने छाला ग्ल्यानको वरिपरिको सुरक्षात्मक खोल हो । फोरस्किन एक इन्चको चार भागको एक भाग पछाडी तान्नु सामान्य काम जस्तो देखिन्छ । तर यो गाह्रो छ । त्यसैले ती पुरुषहरूको लागि जसको फोरस्किनमा बिल्कुल सहयोगको मनोभाव छैन । साबुन र लुबृकेसनले यसको तनाब कम गर्न सक्छ । यसलाई केहि दिन सम्म बिस्तारै र राम्ररी प्रयास गर्नुहोस्र र त्यसपछि अभ्यासको साथ कम गर्नुहोस् । स्मेगालाई धुन नुहाउने बेला तान्न मिल्ने छाला पिछाडी तान्नु आवश्यक छ जुन त्यहाँ संकलन हुन्छ । धेरै सानो कट्टु नलगाउनुहोस् वा यसले रगतको प्रवाहलाई सीमित गर्नसक्छ । यसबाहेक अण्डाकोशहरूद्वारा उत्पन्न विर्यको गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट यो धेरै राम्रो देखिंदैन । यो साँच्चै अचम्मलाग्दो छ कि कतिजना पुरुषले आफ्नो फोरस्किन तल सफा गर्दैनन्, पैट्रिक फ्रेन्च, यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भन्छन् । एउटा पुरुष लिङ्ग, एउटा मांसपेशी होईन र तपाईंले यसलाई मोड्ने प्रयास गर्दा केही गम्भीर क्षति गर्न सक्नुहुनेछ । दोस्रो, यो ठाडो हुने नै हो त्यसैले यस बारे केही असामान्य छैन । पुरुष लिङ्गमा कुनै हड्डिहरु हुँदैनन् तर कहिल्यै पनि जोड लगाउन प्रयास नगर्नुहोला र वा आफ्नो पुरुष लिङ्ग खुम्चाउने नगर्नुहोला । यो नशाहरू बाट बनेको एक ट्यूब जस्तै हुन्छ जुन भरिन्छ र ठाडो हुन्छ । यदि तपाइँले यसलाई उल्लङ्घन गर्दै बटार्नुहुन्छ भने यसले नशाहरु फुट्न सक्छ र सुन्निनुको कारण हुनसक्छ जुन दर्दनायक हुनसक्छ । पुरुष लिङ्गमा भएका कुनै पनि सुन्निएको भाग, चिरा परेको वा दागहरुलाई कहिल्यै वेवास्ता नगर्नुहोस् किनकी यो यौन रोग वा संक्रमणको लक्षण हुन सक्दछ
Q मेरो तौल घटाउने कुनै विश्वसनीय उपाय छ । म काम गर्ने महिला भएकोले र व्यायामको लागि समय छैन । तर यदि छ भने तपाईं मैले अबलम्बन गर्न सक्ने आहारको सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।
जब यहाँ तौल घटाउने कुरा आउँछ, राम्रो खाना खाने योजना र नियमित व्यायाम कार्यक्रम सँगसँगै नै जान्छ । एउटाको बदलामा अर्को राखेर स्थायी परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव छैन । स्वस्थ खानाको साथमा एक हप्तामा कम्तिमा १५० मिनेट व्यायाम गरेर ठूलो फरक पार्न सक्छ । जहाँसम्म स्वस्थ खानेकुराको सरोकार छ, तपाईं आफ्नो दिनचर्यामा निम्न परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ । तीनओटा ठूला खानाहरुको सट्टामा, ५-७ ओटा साना खानाहरू लिनुहोस् । प्रशोधित भोजनहरूको ठाउँमा पूर्ण अन्नयुक्त खानेकुराहरू लिने गर्नुहोस् । उदाहरणको लागि सेतो रोटीको सट्टा खैरो रोटी लिने गर्नुहोस् । तपाईंको भोजनमा प्रशस्त फलफूल तथा हरियो तरकारीहरु समावेश गर्नुहोस् । प्रशोधन गरिएको खाद्य पदार्थ, जङ्क खाना र चिणीयुक्त पेय पदार्थको सेवनबाट बचाउनुहोस् । तपाईंको बिहानको नास्ता, दिउसोको खाजा र रात्रिको खानामा केहि प्रोटीन धेरै भएका खानाहरु भएको निश्चित गर्नुहोस् । अण्डा, चिकेन, माछा, दूध, चिज, दही, पनीर जस्ता खाद्य पदार्थहरु प्रोटीनका राम्रा स्रोतहरु हुन् ।